Sei Ecommerce CRM Inobatsira B2B uye B2C Mabhizinesi | Martech Zone
Shanduko yakakosha mumafambiro evatengi yakakanganisa maindasitiri mazhinji mumakore achangopfuura, asi chikamu che ecommerce chakarohwa zvakanyanya. Digitally savvy vatengi vakakwevera kune yakasarudzika nzira, isingabatike yekutenga ruzivo, uye multichannel kudyidzana.
Izvi zvinhu zviri kusundidzira vatengesi vepamhepo kuti vatore mamwe masisitimu ekuvabatsira mukugadzirisa hukama hwevatengi uye kuve nechokwadi chechiitiko chemunhu pamberi pemakwikwi anotyisa.
Panyaya yevatengi vatsva, zvinodikanwa kuyera zvavanoda uye zvavanofarira uye nekumisikidza hukama hwemunhu kuti udzivise kuti vadzorwe kune vakwikwidzi vako. Panguva imwecheteyo, kuwana nhoroondo yekutenga kwavo, yekuona uye yekutenga kunobatsira kupa kurudziro yakakodzera uye kuve nechokwadi chekuchengetedza. Zvese izvi zvinoda kuunganidza, kuchengetedza, kugadzirisa, kuwiriranisa, uye kutonga huwandu hwakakura hwe data revatengi.
Imwe yemhinduro dzakakodzera kufunga ndeye mutengi wehutano hwehukama system, kana CRM muchidimbu.
Around 91% yemabhizinesi ane gumi+ vashandi anowedzera maCRM mukufambiswa kwebasa.
Kubwinya Kukuru Tsvakurudzo
Makambani ehukuru hwakasiyana anoshanda ecommerce CRM for:
Mutengi manejimendi otomatiki
Multichannel yekudyidzana kugonesa
Kuvaka mufananidzo wakazara wemutengi
Kushambadzira uye sevhisi process automation
Kugadzira imwe chete mutengi manejimendi nzvimbo yeyakakwenenzverwa muchinjika-departmental data kuoneka
Sei Ecommerce CRM Solutions Inogona Kugadzirisa Bhizinesi Rako Zvido
MaCRM anowanzo akazara mhinduro akaiswa mune ecommerce architecture kuitira kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa:
Zvido zvekushanda -Kushanda kwevatengi manejimendi kunonetsa uye, kazhinji, hazvigoneke pasina imwechete inovimbika data hub. Nekuda kweizvozvo, mabhizinesi ekutengeserana epamhepo anoshandisa kuendesa CRM masisitimu ekubatanidza akawanda touchpoints kubatanidza ruzivo rwevatengi mune yakajairwa data repository uye kuve nechokwadi chekuwana kusingadzivirirwe kwedata kumadhipatimendi akasiyana.
Zvido zvekuongorora - MaCRM anogona kushandisa iyo yakaunganidzwa data kugadzira ruzivo rwekuita sarudzo ine ruzivo. Iyo sisitimu inoshandisa iyo yakaunganidzwa yezvemari uye yekushambadzira data yevatengi senge mibvunzo yekutsvaga, maonero, uye nhoroondo yekutenga kugadzira yakadzama profiles, kufungidzira maitiro, kuburitsa kurudziro, kuwedzera kugutsikana kwevatengi, uye kugonesa kutengesa-kutengesa uye kusimudzira.
Zvido zvekushandira pamwe -Kudimburwa kwemadhipatimendi kunogona kukuvadza kugadzirwa kwemafambisirwo ebasa. Kuti ugone kugonesa kuwana kwakabatana kune data revatengi rekushambadzira, kutengesa, uye mamwe madhipatimendi, iwe unoda imwe chete system inogona kurerutsa data kuchinjanisa uye kuwana. Iyo ecommerce CRM inogona kupa imwechete mutengi mbiri yekuwana, isina musono muchinjiko-dhipatimendi rekushandira pamwe, uye ive nechokwadi chekambani-yakakura synergy.
Ecommerce CRM yeB2B uye B2C: Mabhenefiti
Hazvina mhosva kuti kambani yako ecommerce yakakura sei, uye ingave B2B kana B2C, chinangwa chikuru ndechekukwezva, kushandura uye kuchengetedza vatengi. MaCRM anogadzirwa kubatsira makambani kuzadzisa zvinangwa izvi nekuvapa zvinotevera mabhenefiti:
Pedzisa mutengi maonero -Anoshanda evatengi manejimendi matekiniki anotanga neyakadzama mutengi tsvakiridzo yakavakirwa pane yakaunganidzwa data. MaCRM anogona kubatsira vatengesi vepamhepo kuunganidza data uye, zvichibva pairi, kugadzira 360-degree shopper mbiri. Kuwanikwa kwekuona kwevatengi mumadhipatimendi kunobvumira kwakaringana kutengesa funnel manejimendi, kuoneka kwevatengi rwendo rwekutenga, kuteedzera zviitiko, kuvandudza nzira dzekushambadzira dzakanangwa, uye kupa kurudziro yakakodzera.
Yepamberi munhu -MaCRM ane-mu-yakavakirwa muchina kudzidza anogona kukwidziridza iyo yakaunganidzwa mutengi data kuita mukutengesa uye nekutengesa-kuyambuka mikana, kugonesa kurudziro, uye kurerutsa zviitiko zvekutenga. Maitiro akadaro emunhu anobatsira kuunza vatengi uye kukura kuchengetedza uye kuvimbika mitengo.
Multichannel mutengi ruzivo -Nhasi mikana yekudyidzana kweomnichannel ita kuti vatengi vagone kuchinjika mukutenga kwavo, kungave kuburikidza nenharembozha kana zvitoro zvewebhu kana social media. Zvichakadaro, kune vatengesi vedhijitari, kupa zviitiko zvisina mhosva uye zvemunhu munharaunda yemultichannel zvinokonzeresa matambudziko ane chekuita nekubatanidza ma touchpoints akawanda uye kuunganidza mhiri-chiteshi data revatengi muhubhu yakabatana. CRM inogona kushandura zvakakamukana zviitiko zvevatengi kuita imwe chete inounza akawanda machaneti pamwe uye inova nechokwadi chekuti data rese ririkuonekwa, uye mushandisi anogashira ruzivo rwemunhu kuburikidza nechero nzira yekudyidzana.
Automation yekushambadzira mabasa -Kugona kweCRM yekushambadzira kunoreva kutonga pamusoro pekudyidzana kwevatengi panguva yerwendo rwekutengesa, kushambadzira mabasa otomatiki, kugadzirwa kweakarongedzerwa kushambadzira mishandirapamwe, uye mikana yeakagadziridzwa sevhisi nechatbots uye otomatiki mhinduro. Kuita otomatiki ekushambadzira mabasa uye kunzwisisa hunhu hwevatengi kunokonzeresa kusimudzira kwekutungamira, kukura kwemari, uye nzira yakasarudzika yemunhu parwendo rwekutenga kwevatengi.
Future-oriented analytics - MaCRM anoita sevatengi data repositori inounganidza, kuchengeta, uye kushandisa iyo data kuita sarudzo dzakadzika. Nekuda kweiyi sosi yechokwadi, iyo data inogona kushandiswa kugadzira akadzama profiles evatengi, kufungidzira nhanho yekubatana kwavo, kufanotaura maitiro, uye kuona nhanho iri mukati mepombi yekutengesa kuti ishandise panguva yekushambadzira matekiniki uye kupa mazano akakodzera. Zvakare, iyo sisitimu inogona kuona vanokoshesa vatengi uye nzira dzakanakisa dzekutora kwavo kuti vakupe iwe kurudziro yakakodzera ine chekuita nekuwedzera zviito zvinoshanda.
Kuwana mhinduro yeCRM inogona kuve iyo nzira chaiyo yekuita otomatiki manejimendi evatengi, kupa maitiro emunhu, kuwedzera kuchengetedza uye kuita kwebhizinesi rose. Uyezve, nekubatanidza zvisina mhosva nemamwe mamodule eecommerce architecture yako, mhinduro yeCRM inogona kunyatsozadzisa kushanda kweiyo ecosystem yese.
Tags: Analyticsb2b crmb2b ecommerceb2cb2c crmb2c ecommerceCRMcrm reportingmutengi data repositoriesmashandiro evatengimutengi wehutano hwehukamamutengi achishumamaonero evatengiecommerceecommerce crmKushambadzira mashandiromultichannel mutengi ruzivo
Gleam: Mapurogiramu Ekushambadzira Akagadzirirwa Kukurisa Bhizinesi Rako
Kero Standardization 101: Mabhenefiti, Nzira, uye Mazano